सुस्मिताकी आमालाई ध’म्की आएको हो ? नन्दे जवाईले किन बाचा गरे सुस्मीताकी आमा संग ?(भिडियो) – Jagaran Nepal
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले सुस्मिता केसी थापाको ह’त्या प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरुलाई प’क्राउ गरीसार्वजनिक गरि सकेको छ । मृ’तक केसीको ह त्यामा उनकै ससुरा प्रकाश थापा, कान्छि नन्द सीता थापा, सासु तुलसा थापा र जेठी नन्द दुर्गा थापा संलग्न देखिएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
सुस्मितालाई आफ्नै घरको भान्सा कोठामा ससुरा, सासु र कान्छि नन्दले ला’ठि, लोरोलगायतले टा,उकोमा हि र्काएर मा’रेको प्रहरीको अ’नुसन्धानबाट खुलेको छ । जेठी नन्द दुर्गा थापा भने त्यसदिन काठमाडौँ भएको प्रहरीले जनाएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ४ घर भएकी २६ बर्षकी थापा असार २ गते मृ’त अवस्थामा फेला परेकी थिईन् ।
प्रहरीको प्रारम्भीक अनु’सन्धानबाट सुस्मितालाई ससुरा प्रकाश थापाले केही दिन अघि बाथरुममा यौ’ न दू’र्व्यव हारको प्रयास समेत गरेको खुलेको छ । अभियु’क्तहरुलाई जन्म’कै दको सजाँय माग गरिने प्रहरीले जनाएको छ । यो भिडियो हेरौ